Quark wuxuu dhiirrigeliyaa xalka isku dhafan ee baahiyaha daabacaadda ganacsigaaga | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 26, 2009 Khamiista, Noofembar 26, 2009 Douglas Karr
Quark wuxuu bilaabay codsi websaydh isku dhafan oo lagu darayo sheybaarado xirfadlayaal ah oo ay weheliso barnaamij kombuyuutar cusub, Horumarinta Quark. Waa qaab quruxsan oo xiiso leh… soo dejiso arjiga ku saleysan Windows-ka waxaadna bilaabi kartaa tafatirka iyo soo dejinta qalabkaaga suuqgeynta.
Marka alaabtaada la soo raro, waxaad ku daabacan kartaa oo aad ugu qaybin kartaa gudaha shabakad daabacayaal ah. Adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad naqshadeyso kaararka ballanta, buug-yaraha, kaararka ganacsiga, rasiidhyada, xaashiyaha xogta, baqshadaha, xaashiyaha, waraaqaha waraaqaha iyo kaararka boostada ee qaab-dhismeedka xirfadaysan loo soo saaray. In badan oo ka mid ah tusaalooyin xirfadleyaal ah ayaa goobta ka jira - laga bilaabo Xisaabinta ilaa adeegyada caafimaadka xoolaha.
Quark wuxuu furay adeegii madbacado madaxbannaan iyo sidoo kale madaxbanaan iyo naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah. Wixii ku saabsan "Is Samee naftaada" meherad yar ama dhexdhexaad ah, tani waa xalka badbaadin kara urur waxoogaa waqti ah, dadaal iyo lacag ah.
Anigu ma aanan tijaabin adeegga (wuxuu u muuqdaa kaliya Windows-based), laakiin waxaan xiiseynayaa inaan ka maqlo kuwa isku dayay. Mashiinnada habeynta khadka tooska ah iyo tifaftirayaasha aan u isticmaalay qalabka daabacaadda ayaa si cadaalad ah u adkaaday adeegsiga
Tags: JavaNode.jsdhufto eeMidnimada
Nov 27, 2009 saacadu markay tahay 9:21 PM
ma waxaa jira tijaabo bilaash ah w oo la isticmaali karo?